घरको आँगनमै सुतेका थारुको हत्या ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
घरको आँगनमै सुतेका थारुको हत्या !
बर्दिया, ५ असार, २०७६ । बर्दियाको राजापुरमा आँगनमा सुतिरहेका व्यक्तिको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको छ । राजापुर नगरपालिका–३ नंगापुरमा ५५ वर्षीय जयराम थारुको बुधबार राती आफ्नै घरको आँगनमा सुतिरहेको अवस्थामा हत्या भएको हो ।
घरमा मृतक र उनकी बुहारी मात्र थिए । बुहारी घरमा भित्र चुक्कुल लगाएर सुतेको र मृतक ससुरा बाहिर आँगनमा सुतेका थिए । उनका छोरा भने वैदेशिक रोजगारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना कसले र किन घटाएको भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायव उपरीक्षक मदनजित महराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राती खाना खाइ सुतेका थारुको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । महराका अनुसार थारुको निधारमा धारिलो हतियार प्रहार भएको देखिन्छ । अनुसन्धानको लागि कुकुरसहितको टोली घटनास्थल पुगिसकेको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: 2019-06-20 2019-06-20 , संवाददाता: Aajako Khabar
Tagged बर्दिया हत्या
शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकबाट पार्टी एकता टुंगिन्छ : प्रचण्ड
[कविता] लाग्यौँ सधैँ नक्कलमा
२१ सदस्यीय समुदाय–प्रहरी पालिका समिति गठन
Tags: बर्दिया, हत्या